Sweden oo aqoonsatay guurka gabar 14 sano jir ah, hadana ka laabatay | Somaliska
Degmada Göteborg ayaa ogolaatay guurka gabar 14-sano jir ah oo qaxooti ku soo gashay Sweden sida ay soo qortay idaacada Ekot. Arintaan ayaa la’yaab ku noqotay shacabka Sweden maadaama sharciga wadanka u mamnuucaya guurka dadka ka yar 18-sano.
Gabadha yar oo 14-sano jir ah ayaa la sheegay in uu qabo nin 21-sano jir ah oo ay Sweden soo wada-galeen. Markii ay iska dhiibeen wadanka ayaa xitaa ninkaan iyo gabadha uu qabo isku-meel la dajiyay. Socialtjänsten oo ah hay’ada Sweden u qaabilsan daryeelka caruurta ayaa arintaas aad uga soo horjeesatay.
Maadaama guurka gabadhaan iyo ninkeeda uu ka dhacay dibada Sweden ayay Sweden aqoonsantay, iyadoo xitaa markii ay sharciga qaateen ay guurkooda ka diiwaan galiyeen Skatteverket oo aqbashay. Laakiin arintaas ayaa hada dood ka timid maaadaama Sweden ay sanadkii 2009 sharciga adkaysay oo la sheegay in aan la aqbali karin guurka ka yar 15-sano xitaa haddii uu wadan kale ka dhacay.
Per Skogh oo ah qareen ka shaqeeya Skatteverket ayaa aaminsan in ay qalad ahayd in la aqoonsado guurka gabar 14-sano jir ah oo caruur ah. Arintaan ayuu sheegay in ay qalad ku dhacday.
Ka dib markii ay Socialtjänsten cadaadis saartay kamuunka ay gabadha iyo ninkeeda deganyihiin isla markaana ay daba-gal ku sameeyeen arintaan, ayaa hada Skatteverket ay go’aan ku gaadhay in ay ka laabato aqoonsiga guurka isla markaana la kala raray lamaanaha.
December 4, 2015 at 23:16
Bismilaah hadii marka hore lo aqoonsadey ineey iska dhafan ee eheed. Maxa yelaay gurka kama dhiciin sverige. Laga yaabe wadanka ee ka imaaden in dadka is guursadan iyagoo da yaar. Ilaah xaqa hana waafajiyo.
December 5, 2015 at 12:47
dad is raba isma weynayaan ee qarashka ha isku badinina dheh
Waa shey caadi ah maxaa yeeley hadey dad muslin ah yihiin diinteena waa ogoshahey hadeyba gabadha qaan gaarto
Sweden waa dal xeer leh. Aniga la yaabimaayi, hasa ahaatee Ciyaalka hooshooda ma iska wada karaanoo mase waa laga hortaagan yahay ? Waxaan haynaa dad waawayn oo waayeelaa si diin ahaanne isu qaba hooshaadana wata una qoran xeerka Dowlada Doob ama wadaay aa nahay…….
mahamed kheyre haseen
zaki Oogle says:
sheekadan sweden kama dhicin, ee waxay ay ka taagan tahay wadanka Norge. gabdhu waa 14 uur leh oo sidata ilmo kale oo hal sano iyo bilo jira. ninkuna waa 23 jir. Norge waa ay diiday waxayna shaki galay da’da ay ku guursatay oo ahaa 12 jir. taaso aan suurto gal ka ahayn dalka syria laftiisa. waxaa hadalkan uso qaatay oo uso qoray in aad naga dhaaftid waxyaabaha aan runta ku tiirsaneyn waayo. dad badan ayaa wepsite-kan ku xeran oo aqoon meel kale ay wax ka baartan. marka waxaa ku dhihi lahaa sumcada dhowro